Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A November 2010 (3)
Q and A November 2010 (3)
1. အသားတွေ ယားယားနေပါတယ်ရှင်
2. Aspirin 80mg ကို တနေ့ ဘယ်နှစ်ကြိမ် သောက်နိုင်ပါသလဲ
3. သမီးရဲ့ အသက်က ၁၉နှစ် ပြည့်ပြီးပါပြီ
4. ကိုယ်ဝန်ဘယ် နှစ်လမှာ စရှောင့်သင့်လဲဆိုတာကို သိပါရစေရှင့်
5. ကျွန်မ သားလေးက ၂ လသားပါ
6. အရမ်းဖျားပြီး အန်တယ်၊ ဝမ်းအရမ်း သွားရင်
7. မိန်းကလေးရောဂါများအကြောင်း သိလိုပါသည်ရှင့်
8. ဦးနှောက်ခွဲစိတ်မှုက သေရေးရှင်ရေး မဟုတ်ရင် လုပ်သင့်ပါသလား
9. လက်ချောင်းဟာ ပြန်တည့်အောင်လုပ်လို့ ရပါသလား
10. ရေကူးတာ ကြာသွားလို့ အအေးမိပါတယ်
Q: ကျွန်မ အသားတွေယား ယားနေပါတယ်ရှင်။ လေအေး ထိရင်ပိုယားပါတယ်။ မကုတ်ရင် အဖုမတွေ့ရဘူး။ ကုတ်မှ အဖုလေးတွေ ထွက်လာပါတယ်။ ကုတ်မိရင် ပိုယားလို့မဆုံးတော့ပါဘူး။ ပခုံးမှ ပေါင်အထိ ယားပါတယ်။
A: ဖြစ်တဲ့သူ အသက်။ ဖြစ်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ ဘယ်ဆေးသောက်နေလဲ။ သက်သာလား။ (အလာဂျီ) ဖြစ်တာပါ။ မတည့်တာပေါ့။ မတည့်တယ်ဆိုတာ ရာသီဥတု၊ အစားအသောက်၊ အနံ့အသက်၊ ဆေးဝါးတွေကနေ ဖြစ်စေတတ်တယ်။ တယောက်နဲ့ တယောက် မတူကြဘူး။
Cetirizine ဆေးကို အများဆုံး သုံးတယ်။ (အလာဂျီ) ရရင် ကိုယ်ထဲက အလိုလိုထွက်လာတဲ့ Histamine ကြောင့် လူဟာ နှာခြေ၊ ယားယံ၊ မျက်ရည်ယို၊ နှာရည်ယို၊ ဖြစ်မယ်။ အအေးမိ လက္ခဏာတွေပါဘဲ။ တချို့မှာ အနီပြင်တွေ ထွက်မယ်။
ဒီဆေး သောက်ရင် ကားမမောင်းသင့်ဘူး တွေးတောတာကို ထိခိုက်တယ်။ အရက် ရှောင်ရမယ်။
Q: ဆရာရှင် Aspirin 80mg ကို တနေ့ ဘယ်နှစ်ကြိမ် သောက်နိုင်ပါသလဲ။ Aspirin က အဆစ်ရောင် ကျစေပါသလား။
Heart Health နှလုံးရောဂါအတွက် = Aspirin တနေ့ 75 mg daily မှ 325 mg အထိပေးသည်။
Acute MI ရက်တို နှလုံး-အဆို့ရှင် မကောင်းသည့်ရောဂါ = တနေ့ 160 မှ 325 mg daily ရက် ၃ဝ ဆက်တိုက်သောက်ပါ။ လိုအပ်လျင် နောက်ထပ် ရက် ၃ဝ ဆက်သောက်ပါ။
Anticoagulant သွေးမခဲစေလိုခြင်း = တနေ့ 75mg
Aspirin 80 mg ကို တနေ့ ၃ကြိမ်သောက်တာ အရောင်မကျသေးပါ။ Ibuprofen ပြောင်းသောက်ရမလား ဆရာ။ ဘယ်လောက် mg သောက်ရမလဲ။ Aspirin က အဆစ်ရောင်ကျစေပါသလားဆရာ။ ESR 53 ဖြစ်နေလို့။ လက်ဆစ်ရောင် တာကျချင်လို့ဆရာ။ Ibuprofen ကလဲ တခါသောက် ဘက်လောက် mg သောက်ရမလဲ။
Aspirin က သတ္တိ သုံးမျိုး ရှိတယ်။ ၁။ ကိုယ်ပူတာ ကျစေတယ်။ ၂။ ရောင်နေတာ လျော့စေတယ်။ ၃။ နာတာ-ကိုက်တာ သက်သာစေတယ်။
လူကြီးအတွက် အများဆုံး Ibuprofen တခါသောက် 800 milligrams တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ စုစုပေါင်း တနေ့ 3200 mg per day
Q: သမီးရဲ့ အသက်က ၁၉နှစ် ပြည့်ပြီးပါပြီ။ သမီးက (့) မှာနေပါတယ် ညညဆို အိပ်ဖို့က တော်တော်ခဲယဉ်းတယ်ဆရာ။
မီလီဖိုက် ၂ လုံး သောက်တောင် အိပ်မပျော်ဘူး။ ကူညီပါအုံး စိတ်လှုပ်ရှားမူ ရှိရင်လဲအိပ်မရဘူး။ ပြီးတော့ သူများတွေလို တက်ကြွမူလဲ မရှိဘူး။ အမြဲတမ်း စိတ်ပင်ပန်းတယ်။ စိတ်အလိုမကျဘူး။ နောက်ပြီးတော့ဆရာ သမီးရဲ့ ခြေလက်တွေက ကိုက်တယ်။ ညအ်ိပ်ခါနီး ပိုဆိုးတယ်ဆရာ။
A: (မီလီဖိုက်) ဆေးက စိတ်ငြိမ်ဆေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ဆေးနာမည် စာလုံးပေါင်း သိရမှ သေခြာမယ်။ (ဗေလီယမ်) လိုဆေး ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ တခါတလေ သောက်တာ ကိစ္စမရှိပါ။ ဆေးက စွဲသွားတတ်တယ်။ ရေးပြတာကို ဖတ်တော့ စိတ်ကို တခုခု လုပ်ပေးစရာ လိုနေတယ်။ စိတ်လှုတ်ရှားမှု များတာ၊ စိတ်ပင်ပန်းတာ၊ အိပ်မရတာ၊ တက်ကြွမှု နည်းတာတွေ။ စမ်းသပ်တာ မလုပ်ရတာမို့ မှန်းပြီးဘဲ အကြံပေးပါမယ်။
တစ်အချက် စိတ်မပျက်ပါနဲ့။ ငါကောင်းလာမယ်လို့ လုံးဝမှတ်ထင် ယုံကြည်လိုက်ပါ။ ဒီအရွယ်၊ ဒီလိုနေရာမှာ နေရသူတွေမှာ ဒီလိုခံစားရတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
စိတ်ကို ကုသရာမှာ (ကောင်ဆယ်လိန်း) ဆိုတဲ့ အမေး-အဖြေလုပ်တာ ပါတယ်။ ဒီတော့ အချိန်ရရင် ဆရာ့ဆီ အီးမေးလ် ရေးပြီး စိတ်ထဲဖြစ်ပေါ် ခံစားရတာ မှန်သမျှ ရေးပါ။ ပြန်ဖြေရင်း ကုသမှု လုပ်ပါမယ်။ ကိုယ်ရေးအခြေအနေ၊ ရာသီ စတာတွေပါ ရေးပြလို့ရတာမျိုးလဲ ထည့်ရေးပါ။ အလုပ်ချိန်လဲပါပါစေ။ ဒါမှ ဆေးနဲ့ အလုပ်ချိန် ကိုက်အောင် ညွှန်းရမှာ။
ခြေလက် ကိုက်တာအတွက် အနာသက်သာဆေး တမျိုးမျိုးသောက်ပါ။ Paracetamol, Ibuprofen ဆေးပြားကို တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၃-၄ ကြိမ်အထိ သောက်နိုင်တယ်။ Ibuprofen ဆိုရင် ဆေးနဲ့ အစာနီးပါစေ။
ဘာသာရေးအရ စိတ်ငြိမ်စေတာမျိုး အားကိုးနိုင်တယ်။ စာဖတ်နိုင်ရင်လဲ ကောင်းတယ်။ ဘာစာဖြစ်ဖြစ် မအိပ်ခင် ဖတ်ပါ။
နှလုံးခုန်နှုန်း သိချင်တယ်။ လက်ကောက်ဝတ်မှာ လက်မဘက်က ခုန်နေတာကို ဖါသာစမ်းပါ။ တမိနစ်မှာ ဘယ်လောက်လဲ။ ဘယ်ဘက်ရင်ပတ်က နှလုံးခုန်တာလဲ စမ်းနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန် တမိနစ်မှာ ၇ဝ-၈ဝ ရှိတယ်။
ပူပင်စရာမျိုး တတ်နိုင်သလောက် လျှော့ပါ။ အပျော်ရှာပါလို့ ပြောချင်တာ မဟုတ်ပါ။ ဘာမဆို စိတ်က အရေးပါတယ်။ ဦးဆောင်တယ်။ သက်သာရရတယ်ဆိုတာလဲ စိတ်ဘဲ။ ခံစားနေတာလဲ စိတ်ဘဲ။ စိုးရိမ်စိတ်ရှိရင်လဲ ပြောပြပါ။ ပြောနိုင်တာဘဲ ပြောပါ။ ဆရာဝန်ကို ပြောပြလိုက်ရတဲ့အတွက် သောက မပိုစေချင်ပါ။ အဝေးကနေ ဆေးမန်းနဲ့ ကုလိုက်တယ်။ ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ကျန်းမာ-ချမ်းသာပါစေ။
Q: ဆရာရှင့် ကျွန်မ အမျိုးသားနှင့် လိင်ဆက်ဆံတိုင်း ပြီးမြောက်သည်းအဆင့်ကို ရောက်ပါသည်ရှင့်။ ကိုယ် ဝန်ဘယ် နှစ်လမှာ စရှောင့်သင့်လဲဆိုတာကို သိပါရစေရှင့်။
A: သီအိုရီအရ ပြောရရင် ကိုယ်ဝန်နုစဉ် (၃ လအထိ) ဆက်ဆံတာက ပျက်စေမလား၊ ပိုးဝင်မလား စိုးရိမ်နိုင်ပြီး၊ နောက်ဆုံး ၃ လ မှာ ဆက်ဆံရင် စောစောမွေးတတ်တယ်လို့ မှန်းကြတယ်။ ယေဘုယျပြောရရင် ရှောင်ရမဲ့ ကာလ မရှိပါ။ လက်တွေ့ကို ပြောရရင် (ပိုဇေရှင်) ရွေးဘို့ လိုတယ်။ တိုက်ရိုက် အီးမေးနဲ့မေးရင် ရေးထားတာကို ပို့ပေးပါမယ်။ အများဖတ်စာ အနေနဲ့တော့ တင်ဘို့ မသင့်လို့ ထင်လို့ပါ။
25 Nov 10, 12:42
Q: ဆရာရှင့် ကျွန်မသားလေးက ၂ လသားပါ။ ရေကျက်အေးကို လုံးဝမသောက်ပါ။ အရင်က ပျားရည်နဲ့ဖျော်ပြီး တိုက်တော့ သောက်ပါတယ် အခုပျားရည်ကုန်တော့။ ရေကိုလုံးဝ မသောက်တော့ ဝမ်းက ၂ ရက် ၁ ခါလောက်ပဲ သွားပြီး အရမ်းညစ်ရပါတယ်။
A: ဒီအရွယ်လေးတွေက အကျင့်ကို လိုက်တယ်။ ချိုတာကို အကျင့်ရနေခဲ့လို့ပါ။ ပြန်ပြင်ပေးရမယ်။ တဖြေးဖြေး ပြင်ပါ။ ပျားရည် မရသေးရင် သကြား၊ ဂလူးကို့စ် နဲနဲနဲ့ ဖျော်ပါ။ တဖြေးဖြေး အချိုလျှော့ပေးပါ။
ရေအဝင်နည်းရင် ဝမ်းချုပ်မယ်။ ဝမ်းချုပ်နေရင် ဝမ်းခြူပါ။ ဝမ်းနုပ်ဆေး မတိုက်ပါနဲ့။ စအိုလေးထဲကို ဝမ်းခြူတောင့် Ducolax ရှာရရင် ထည့်ပါ။ ကလေးအရွယ်-လူကြီးအရွယ် လာတယ်။ ကလေး ဆိုတာတောင် အသက်မတူလို့ အတောင့်ကို ကလေးစအိုနဲ့ အနေတော်အောင် ပြုပြင်ပါ။
ဆေးဆိုင်က ရှာမရရင် ဆပ်ပြာကို အနေတော်ပုံ လုပ်ပါ။ ၂ လက္မမလောက်ဆို ရတယ်။ ရေနဲ့ နူးပြီး စအိုထဲ ထည့်ပါ။
ဆရာမ အသိရှိရင်လဲ ရာဘာ-ဆီးခြူပိုက် အငယ်စားကို ကလေးစအိုထဲ ၂ လက္မမလောက် သွင်းပြီး ကြက်ဆူဆီ၊ (ပါရဖင်ဆီ) တခုခုကို ဆေးထိုးပိုက်နဲ့ ၁ဝ-၁၅-၂ဝ စီစီ ထည့်ပေးနိုင်တယ်။ အဆီရှာရ ခက်သေးရင်လဲ ဆပ်ပြာရည် ခပ်နွေးနွေး (ကိုယ်အပူချိန်လောက်) ကို ၂ဝ-၃ဝ စီစီထည့်ပြီး ဝမ်းခြူနိုင်တယ်။ ၃-၁ဝ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ဝမ်းရှိတာ ထွက်လာလိမ့်မယ်။
8 Nov 10, 08:26
ကလေးငယ်တစ်ယောက်ဟာ အရမ်းဖျားပြီး အန်တယ်၊ ဝမ်းအရမ်း သွားရင် ဘာရောဂါများ ဖြစ်ပါသလဲဆရာ။ ဆရာဝန်က ပြောတယ် သွေးဖေါက်ကြည့်တော့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးရှင်းပြပေးပါ ကလေးက အသက် ၈ နှစ်ရှိ ပါတယ်။
သွေးဖေါက်ကြည့်တာက သွေးမှုံ (platelet) နဲနေတာဆိုရင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်မယ်။ ဖျားတာ၊ အန်တာ၊ ကိုက်ခဲတာတွေ အပြင် ဆိုးရင် သွေးယိုလာမယ်။ နှာခေါင်း၊ သွားဖုံးကနေယိုနိုင်တယ်။ ဆီးထဲလဲ ပါတတ်တယ်။ အများဆုံးက သွေးခြည်ဥလေးတွေ ထွက်တယ်။ သွေးမှုံ (platelet) နဲတာအပေါ် မူတည်ပြီး ဆေးရုံတက်ခြင် တက်ရမယ်။ သွေးသွင်းခြင် သွင်းရမယ်။ သွေးမှုံကိုသာ သွင်းမှာ။ လိုအပ်ရင် Drip သွင်းရမယ်။ သိပ်မဆိုးရင် သွေးယိုတာ၊ သွေးဖိအားကျတာ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ရေများများ၊ ဓါတ်ဆားရည်တိုက်ရမယ်။
7 Nov 10, 09:07
ဆရာရှင့် မိန်းကလေးရောဂါများအကြောင်း သိလိုပါသည်ရှင့် အထူးသဖြင့် သားအိမ်အလုံးတည်သည့် ရောဂါ ရှိ-မရှိကို ဘယ်လို သိနိုင်ပါသလဲ။ အဲဒီရောဂါအစမှာ ဘယ်လိုခံစားရသလဲဆိုတာ ဖြေကြားပေးစေလိုပါသည်ရှင့်။
သားအိမ်အလုံးတည်တာမှာ အနည်းဆုံး ၂ မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ သားအိမ်ကနေဖြစ်တာနဲ့ မျိုးဥအိမ်ကဖြစ်တာ။ အပျိုကြီး၊ အိမ်ထောင်ရှိပေမဲ့ ကလေးမရှိသူ၊ ကလေးနည်းသူတွေမှာ သားအိမ်က အသားလုံးဖြစ်တတ်တယ်။ မျိုးဥအိမ်အလုံးက အရွယ်-အခြေအနေ မရွေးဖြစ်တတ်တယ်။ ရာသီဖြစ်စဉ်အပေါ် သက်ရောက်တာ ရှိသလို တချို့မှာ မသက်ရောက်ဘူး။ အများဆုံးက ကြီးလာတာတောင် မနာဘူး။ သိသာလာမှာက ဗိုက်-ဆီးစပ်မှာ ကိုယ်ဝန်လိုဘဲ အလုံးစမ်းရတာဖြစ်တယ်။ ကြီးကြီးလာမယ်။ နှစ်နဲ့ချည်ကြာတယ်။ ဗိုက်နဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းစမ်းသပ်မှုကနေ သိသာတယ်။ အကောင်းဆုံးက Ultrasound ရိုက်ရတယ်။
7 Nov 10, 03:51
ဦးနှောက်ခွဲစိတ်မှုက သေရေးရှင်ရေး မဟုတ်ရင် လုပ်သင့်ပါသလားခင်ဗျာ။ ဦးခေါင်းပိုင်း ခွဲစိတ်ပြီးရင် လူနာက အကောင်း ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။
ဦးနှောက်ကို ခွဲစိတ်ရတဲ့ ရောဂါ သိရမှာ ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဦးနှောက်အထူးကုဆရာဝန်ကသာ ဖြေနိုင်မှာပါ။ အခြေခံအားဖြင့် ဆရာဝန်ကနေ ခွဲတာ နဲ့ မခွဲဘဲနေတာကို အကောင်း-အဆိုး ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က (့) ကပါ။ သူငယ်ချင်း တယောက်ဟာ လက်ခလယ် လက်ချောင်း ကျိုးတော့ အစိုးရ ဆေးရုံ သွားပြတာ ဆရာဝန်ခွဲပေးပြီး ပြန်ဆက်တော့ မတည့်ဘဲလွဲနေပါတယ်။ ကွေးဆန့်လို့တော့ မရတော့ပါဘူး။ နည်းနည်းတော့ ထုံကျင်ပါတယ် တစ်နှစ်လောက်တော့ကြာပါပြီ။ အဲ့ဒါ လက်ချောင်းဟာ ပြန်တည့်အောင်လုပ်လို့ရပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် ဒီထက်ပိုပြီး ဘယ်လို ဆိုးကျိုးတွေဖြစ် လာနိုင်ပါသလဲ ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။
တနှစ်ရှိတာကို ပြန်ပြင်ဘို့ မလွယ်ပါ။ ကျိုးတဲ့နေရာက တစ်ရှူး (အရိုး-အရွတ်-အကြော) တွေ အမာရွတ်လို ဖြစ်သွားပြီ။ ခိုင်သွားပြီ။ မတည့်လဲ မတည့်တဲ့အတိုင်း ခိုင်သွားပြီ။ လက်ခလယ်လို ခပ်သေးသေးဆိုတော့ ပိုကျဉ်းမြောင်းတယ်။ ထုံတာကလဲ အာရုံကြောလေးတွေ ထိခိုက်သွားလို့ပါ။ အကွေး-အဆန့်မရတာက အဆစ်ကိုပါ သွားထိခိုက်လို့ ဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် လက်ဖဝါးဖက်မှာ ဖြစ်ရင် ကွေးတာကိုလုပ်တဲ့ အရွတ်ကြော၊ လက်ဖမိုးဖက်ဆိုရင် ဆန့်တာလုပ်တဲ့ အရွတ်ကြော ထိခိုက် သွားတတ်တယ်။ အကွေး-အဆန့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ သက်သာလာလိမ့်မယ်။ ပြန်တည့်အောင်၊ ပြန်အလုပ် လုပ်နိုင်အောင် ရချင် ရနိုင်ပါတယ်။ Bone/Physio specialist အရိုး-အကြောအထူးကုနဲ့ သေခြာလုပ်ရမယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း ဖါသာလုပ်ပါ။ ပူတဲ့ ဗမာလိမ်းဆေးလဲ လိမ်းပေးပါ။
စဖြစ်တာက ရေကူးတာ ကြာသွားလို့ အအေးမိပါတယ်။ ဖျားမှာစိုးလို့ဆေးတွေသောက်ပေမဲ့ အအေးမိပြီးဖျားပါတယ်။ ဆေးခန်းပြပါတယ်။ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး ကျန်ပါတယ်။ နှာစေးတာက မသက်သာပဲ နှပ်ညှစ်တိုင်း နှာရည်အဝါရောင်တွေ ထွက်လာပါတယ်။ နားကလည်း ကိုက်လာ၊ မျက်စိကလည်းအောင့်၊ သွားနာသလိုလည်း ဖြစ်လာပါတယ်။ ဘယ်ဘက် ခေါင်း တခြမ်းလုံးက လေးပြီး ခေါင်းငုံ့လိုက်ရင် ကျဉ်သလိုမျိုးဖြစ်လို့ ၂ ရက်အကြာမှာ နား၊ နှာခေါင်း ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြပါတယ်။ ENT ဆရာဝန်က ခရင်းခွလိုပုံစံမျိုးနဲ့ နားရဲ့အနောက်ပိုင်း အရှေ့ပိုင်းကို စမ်းသပ်ပါတယ်။ နားရဲ့ အရှေ့က အသံပိုကြားရပြီး နားအနောက်ပိုင်းက အသံတိုးတိုးပဲ ကြားရပါတယ်။ ခေါင်းပေါ်ကိုတင်ပြီး စမ်းတော့ အသံ လုံးဝ မကြားရတော့ပါဘူး။ နားထဲနဲ့ နှားခေါင်းထဲကိုလည်း ကိရိယာနဲ့ ကြည့်ပါတယ်။ အားလုံးကြည့်ပြီးသွားတော့ အာရုံကြော အားနည်းလို့ နှားခေါင်းကဖြစ်တာက နားကို သွားထိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အအေးမမိဖို့လည်း မှာပါတယ်။
VIT B DENK (Vitamin B 1 100mg & B6200 mg)
NEUROGIN (Organic Ginkgo biloba leaf extract (EGb 761) 60 mg)
ALLERDAY 120 (Fexofenadine hydrochloride 120mg)
VITACEE (Vitamin C 500 mg)
FLUMOX (Amoxicillin and flucloxacillin capsules) ဒီဆေးတွေပေးထားပါတယ်ဆရာ။ ရန်ကုန်ကပါဆရာ။ ဘာဖြစ်တယ် ဆိုတာ သေသေချာချာလည်း သိချင်လို့ပါ။ နာတာရှည်ရောဂါမျိုး ဖြစ်မှာ ကြောက်လို့ပါ။
မပူပါနဲ့ အအေးမိရာကနေ ခေါင်းခွံမှာ အထဲရှိနေတဲ့ လေခိုအခေါင်းတွေအထိ ပိုးဒဏ်ခံရလို့ပါ။ အသံလှိုင်းပို့တာကို သွားထိခိုက်တာပါ။ ပြန်ကောင်းမှာပါ။ ဆေးတွေ ပေးတဲ့အတိုင်း သောက်ပါ။ နွေးနွေးထွေးထွေး နေပါ။ ရေများများ သောက်ပါ။ အစာ ကောင်းကောင်းလဲ စားပါ။ မျှတစာကို ပြောတာပါ။ ခဏခဏ အအေးမိရင်တော့ သတိထားပါ။ လမ်းတွေဆို့တာ ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ လိုအပ်သေးရင် နှာခေါင်းထဲ ပန်းရတဲ့ဆေး ပေးပါလိမ့်မယ်။ ရေနွေးငွေ့ရှူတာလဲ ကောင်းတယ်။